Dhibaatada Qabyaalada ... er ... Widgets | Martech Zone
Isniin, November 24, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maanta waxaan la qadeeyay kooxdeena goobta shaqada waxaanan kala hadlay teknoolojiyada widget. Anigu ma ahi taageere aaladda widget-yada si aan daacad u noqdo. Waxaan aaminsanahay inay badanaa jebiyaan sii wadida shaxanka baloogyada, iskudhaafyada qaar ka mid ah baloogyada, waxaana badanaa loo dhisaa si loogu fiirsado naftooda ee ma ahan websaydhka.
Haddii aad kudareyso widgets or qalabka aaladdaada, boggaaga, boggaaga iGoogle ama xitaa qalabkaaga desktop-ka ah ayaa loo malaynayaa inay fududaynayso is-dhexgalka iyada oo aan loo baahnayn barnaamij. Si fudud u dhaji furaha ama soo dejiso wijidka oo waad tagaysaa.
Meesha aan ugu jeclahay ee ku saabsan hubinta Widgets waa Mashable, laakiin isma arko inaan isku rakibo marar badan. Marwalba waxaan raadinayaa faa'iido akhristayaashayda - oo caadi ahaan ma heli karo mid. Waxaa laga yaabaa inaan ku rakibo aalado haddii ay jiri laheyd faa iido mashiin raadis, laakiin inta badan wijetooyinka waxay xambaaraan macmiil dhanka xogta la uruuriyayna waligood masoo arag botin-ka makiinada wax raadinta.
Dhibaatada kale ee widget-yada ayaa ah in hal gabal uusan ku wada habboonayn. Qalabka ku habboon ee aragtida abuureha daruuri maahan inuu noqdo aalad ku habboon aragtida qofka isticmaala. Waxaan arkaa tan iyo in kabadan simply Si fudud uma qaabeyn karo widget si aan ula jaan qaado isticmaalka iyo qaabeynta degelkeyga. Nadiifinta waxay leedahay taageerayaal aad u tiro badan oo hogaamiye u ah widgetget… iyadoo siineysa xoogaa waxyaabo gaar ah Analytics iyo raadinta qalabka.
Ma hubo inaan weligay aqoonsaday qiime ganacsi, in kastoo! Waxaan u janjeeraa xagga isdhexgalka iyada oo loo marayo APIs maadaama aan iswaafajin karo muuqaalka iyo dareemada degelkeyga, ku dar waxqabadyo dheeri ah, oo laga yaabo inaan ka faa'iideysto xoogaa mashiinka raadinta.
Wixii a Software-ka oo ah barnaamijka wax lagu qoro ee adeegga sida Compendium, waxaa jira faa iidooyin aaladda loo yaqaan 'widgets', in kastoo. Maaddaama qalabka loo yaqaan 'widgets' uu buuxiyo oo uu ku socdo macmiilka oo uusan ku jirin serverka, ma gelineysid nidaamka guud ee halista ah haddii qof uu isku daro farabadan. Sidoo kale, faa'iido darrooyinka SEO-ga ayaa dhab ahaan isu beddelaya faa'iidooyin loogu talagalay codsi aad u adag xagga aragtida Mashiinka Raadinta. Widgets-ka ma khafiifin doonaan mashiinka raadintaada wanaag.
Haddii macaamiisheennu ay rabaan inay ciriiriyaan boggooda, waxay u badan tahay inay dhaawici doonaan sicir-baddalkooda (dadka gujinaya wicitaanka ficilka ganacsiga keena), sidaa darteed waan uga digaynaa iyaga. Waxaan ku tiirsannahay guusha macaamiisheena sidaa darteed waxaan si adag ugu riixeynaa inaan ka dhigno inay la jaanqaadaan dhaqamada ugu wanaagsan ee suuqgeynta internetka.
Miyaad isticmaashaa widget-yada? Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo nuuca natiijooyinka ganacsi ee aad helayso.
Tags: 20122012 mobile2012 mobilka gacantanaqshadeynta naqshadeyntagelinta lambarka taleefanka firfircooninternet-karaadinta wicitaanadatalooyinka warbaahinta bulshadaliin dhanaangalinta ereyada
Maxaad ila hadlaysaa
Nov 26, 2008 saacadu markay tahay 12:22 PM
Waan kula socdaa Doug. Waxaan sidaa rabaa in aan jeclaado aaladda widget-yada laakiin marwalba way iiga tagaan aniga oo raba inbadan. Waxaan rabaa inaan gudahooda ku galo, qaawiyo, oo aan la jaan qaado boggeyga oo waligey ma awoodo. Marka waxaan marwalba miciin boodaa sifeyn adag iyo gacan ku dhisid wax walba. Waxaa laga yaabaa inaan ahay kaliya nuugista qanacsanaanta aan wax u dhisayo naftayda.
Nov 27, 2008 at 10: 30 AM
Waxaan ahay nin qunyar socod ah oo mas'uul ka ah natiijooyinka ama maqnaashaha sideed goobood, oo ay ku jiraan kuweyga. Marwalba waan xasuustaa (iyo xanuun badan!) Waxa yar ee ay ku qaadato in lagu qaldo booqdaha. Asal ahaan, haddii aad wax ku dhejiso goobtaada waxay ku fiicnaan laheyd inay halkaa si dhab ah u wanaajiso khibrada isticmaale iyo / ama udhaqaajiso dadka xagga diinta. Marka laga soo tago labadaas shey oo waxaad gelineysaa khatar hadafyada ganacsi ee goobta.